အသားနဲ့ဟော့ပေါ့(၂)ယောက်စားစာကို (၄၅၀၀)ကျပ်ဆိုတော့ အမေးဇင်း ? ? – FoodiesNavi
အသားနဲ့ဟော့ပေါ့(၂)ယောက်စားစာကို (၄၅၀၀)ကျပ်ဆိုတော့ အမေးဇင်း ? ?
By yin sandi On June 8, 2018 0
မြောက်ဥက္ကလာကဒူးရင်းမလိုင်အကြောင်းရေးပြီးတဲ့နောက် မြောက်ဥက္ကလာလက်ကအစားအစာတွေဘက် ခြေဦးလှည့်ဖြစ်ရင်း ဟော့ပေါ့ရှယ်ကောင်းပြီး တကယ်ကိုတန်တဲ့ဆိုင်လေးကိုတွေ့ခဲ့လို့ အစားတစ်လိုင်းတို့ကို ဝေမျှပေးချင်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်လေးကတော့ မြောက်ဥက္ကလာ မေဓါဝီလမ်းပေါ်က “ချစ်မိုးကြီး” ပင်လယ်စာဟော့ပေါ့အကင်ဆိုင်ပါ။ ဟော့ပေါ့အကင်ဆိုင်ဆိုပေမယ့် ဟော့ပေါ့အကင်တွေတင်မကသေးပါဘူး ။ အသုပ်မျိုးစုံ ၊ soft Drinks ၊ Beer တွေနဲ့ ဝက်သားဒုတ်ထိုးတွေပါရနိုင်ပါသေးတယ်။
ဘယ်လိုတန်တာလဲဆိုတော့ ဟော့ပေါ့ကိုပင်လယ်စာနဲ့ဆို (၆၀၀၀)ကျပ် ၊ ကြက်/ဝက်နဲ့ဆို (၄၅၀၀)ကျပ်ပဲပေးရတယ်။ အသားတွေကလတ်ဆတ်နေသလို ဟင်းရည်ကလည်းအစပ်အဟပ်တည့်တော့ တော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းတယ်။ (၁)ပွဲကိုလည်း နှစ်ယောက်လုံလုံလောက်လောက်စားလို့ရတော့ ဘတ်ဂျတ်တွက်နေစရာမလိုတော့ဘူးကိုယ့်လူ ? အသုပ်တွေ ၊ အကင်တွေကလည်း လက်ရာကရှယ်ပဲနော်။ မြန်မာဘီယာလေးကို ဇိမ်ခံသောက်ရင်း ဝက်သားဒုတ်ထိုးလေးမြည်းမယ်ဆိုရင်လည်း ဖီလင်စိုးဂွတ်ပဲနော် ?
ဆိုင်အပြင်အဆင်လေးကသပ်ရပ်ပြီး ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်တာတွေလည်းသန့်ရှင်းချက်ပဲ ? ဘော်ဒါတွေနဲ့သွားသွား မိသားစုတွေစုပြီးပဲသွားသွား အကြိုက်တူသွားစေမယ့်ဆိုင်လေးပါပဲ ? ဆိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ မနက်(၁၀)နာရီကနေ ည(၁၀)နာရီထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်မိုးကြီးရဲ့လိပ်စာကတော့ အမှတ်(၆) ၊ မေဓာဝီလမ်း ၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။
Image Source : www.facebook.com/chitmoegyi
ပင်လယ်စာဗန်းလေးတွေဈေးတန်တန်နဲ့စားနိုင်ပေမယ့် လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့ SmokeQ21